Maitiro Akanaka Kwazvo Ekumisikidza Kufona Kutevera Pakati Pako Kwekushambadzira Maitiro | Martech Zone
Yakanakisa Maitiro Ekushandisa Ekufona Kutevera Pakati Pako Maitiro Ekushambadzira
China, July 9, 2015 Chishanu, May 21, 2021 Lance Weatherby
Kudaidza hunyanzvi hwakagadzwa parizvino huri kuita kusimuka kukuru Nekusimuka kwemafoni efoni uye mutsva mutengi mutengi, tinya-ku-kufona kugona kuri kuwedzera kukwezva kune wemazuva ano mushambadzi. Iko kukwezva chikamu cheicho chiri kutyaira iyo 16% gore-pamusoro-gore kuwedzera mune inbound mafoni kumabhizinesi. Asi kunyangwe paine kuwedzera kwekufona uye kushambadzira nhare, vashambadzi vazhinji havasati vasvetuka parunhare vachiteedzera nzira inoshanda yekutengesa uye vari kushaya kuti vangapfura sei uyu museve wakakosha mugoba remushambadzi akangwara.
Ruzhinji rwevatungamiriri veindasitiri vari kuyedza kugadzirisa dambudziko rekushandura kuburikidza nekunzwisisa kukuru pane izvo shambadziro zviripo kana kuti hazvisi kubhadhara. Asi hapana mhinduro inoswedera padhuze nekukwanisika, kuwanika uye nyore-kwe-kushandisa izvo zvazvino uno kufona kwekuteedzera mapuratifomu anopa. Kana zvasvika pakushandisa kuteedzera kwekufona pamazano avo ekutengesa, mabhizinesi anofanirwa kugara achifunga maitiro aya akanakisa kuitira kuti anyatso kuongorora metriki dzekutengesa uye kubvisa nzwisiso ine musoro:
Sekureva kweongororo nyowani nyowani kubva kuShop.org uye Forrester Research, Iyo Nyika yeRetailing Online, mobile optimization ndiyo inonyanya kukoshesa vatengesi. Vatengi 'vakawedzera kupindwa muropa nekutarisa nhare kwakatungamira kune spike mune inbound yekufona vhoriyamu, ichiita kufona kuchitevera chinhu chakakosha cheiyo savvy dijitari mushambadzi zano. Sezvo mafoni emafoni ikozvino ndiyo nzira yekupinda pamberi peizvi mutengesi-wakagadzirira vatengi, kugadzirisa yako webhusaiti nhare inhanho yakakosha kuenda kunoteedzera kufona.
Nekupa yakasarudzika trackable nhamba yefoni kune yega yega kushambadzira mushandirapamwe, kufona yekutevera masevhisi anokwanisa kuona kuti ndeapi masosi ari kutyaira mafoni ako. Iyi nhanho yekuziva inobvumidza mabhizinesi kuziva kuti ndeapi mabhana, bhodhi rebhodhi, mushandirapamwe wemagariro kana kushambadzira kwePPC kwakwezva mutengi zvakakwana kuti afone. Dzvanya-kusheedza maCTA's (Kufona Kuti Uite) zvinotiyeuchidza kuti zvishandiso zvatakabata mumaoko edu zvichiri mafoni, anokwanisa kutibatanidza kwechinguva nemumwe munhu pabhizinesi ratiri kuona.
Mazwi akakosha uye Kushambadzira Dhata-Inotungamirwa
Yekutsvaga injini yekushambadzira (SEM) inoenderera ichitora chikamu chikuru kwazvo pamhepo kushambadzira mari. Zvakawanda senge inbound kufona kwekutevera, kiyi-nhanho yekutevera inogadzira yakasarudzika nhamba yefoni kune yega yega kiyi sosi sosi mukati mekutsvaga, ichibvumira mabhizinesi kudonhedza pasi kune yega yekutsvaga kiyi kiyi nhanho uye kubatanidza mafoni kune chaiwo webhu vashanyi uye nezviito zvavo pane ino saiti. Kushambadzira kunoitwa neData chinhu chakakosha kumabhizinesi ari kutsvaga kuwedzera nzira dzawo dzekushambadzira kumadhiri edhijitari. Kunyangwe mazhinji mabhizinesi madiki achifunga kuti ivo vanozove vanoonekwa kuburikidza newebhu analytics vega, vanowanzo tarisa simba rerunokosha-runhare runhare.
CRM & Analytics Kubatanidzwa
Kubatanidza kufona analytics ndiyo imwe yenzira dzakakosha mabhizinesi anogona kuwana zvakadzama zvekushambadzira ruzivo. Nokubatanidza yavo yekuteedzera mhinduro mhinduro pamwe neazvino software, mabhizinesi anogona kuve akabatana, akasimba akasimba chikuva che analytics kutora mukana we. Kana data rikaonekwa pamwe chete nepamhepo analytics, mabhizinesi anogona kuwana maonero akazara ezvekushambadzira kwavo kushandisa, achivatendera kuti vaone zviri kushanda uye kugadzirisa kana kubvisa izvo zvisiri. Aya mazano anobatsira mabhizimusi zvakanyanya kudzikisa mutengo-pa-kutungamira, kushandura mafoni kuva anotungamira anotungamira uye nekuwedzera iyo ROI yekushambadzira kuyedza.
At CallRail, yekutevera kufona uye analytics chikuva, isu tinobatsira varidzi vebhizinesi kuti vaone kuti ndeapi macampaign ekushambadzira uye ekutsvaga mazwi akakosha ari kutyaira akakosha mafoni. Mutengi wedu National Builder Supply akaitisa edu ekuteedzera mafoni masevhisi uye akakwanisa kucheka PPC kushambadzira kushandisa ne60% tichiri kungochengeta iwo iwo iwo mwero wekutengesa. Kambani iyi yaive zvakare yakakwanisa kudhiraini zvisirizvo zvigadzirwa kubva kune yavo yekushambadzira zano nekuda kwekuziva kwavakawana kuburikidza neCallRail.
CallRail yakanyatsoita mutsauko kwatiri. Ini ikozvino ndine pikicha yakasimba yekutengesa, mari uye margin kupiwa. Ini handichapa kushambadza kushambadza kubatsirwa kwekusahadzika; Ini ndinogona kungobvisa iyo mari. CallRail yakatipa chidimbu chekupedzisira cheruzivo chataida kuti izvi zviitike. David Gallmeier, Kushambadzira uye Kubudirira kweNBS
Kufona kwekuteedzera kwakaratidza kuve kwakakosha pakuvandudza kwevatengi ruzivo, kudzidziswa kwemukati kwakakodzera, kushambadzira kunoitwa nedata, uye sarudzo dzemitungamiri yechizvarwa. Nekushandisa kuteedzera kufona mune yavo yekushambadzira zano, mabhizinesi anogona kubatsira kuvhara iyo ROI chiuno pasina kutyora bhangi. Kufona kuteedzera kunogona kubatsira mabhizinesi kutanga kutarisisa pamishandirapamwe yekushambadza inoshanda - uye rega kutambisa mari pane izvo zvisingaite.
Kutanga Yako Yemahara CallRail Trial
Tags: kufona kwekuteveracallrailmushandirapamwe wekuteveramushandirapamwe-chikamu chekufonadata-inotungamirwa kushambadzirakiyi yekufona yekuteveranhare mbozha yekutevera
Lance Weatherby ndiye Mutevedzeri weMutungamiri weKutengesa uye Kushambadzira ku CallRail. Ane shungu dzekuvaka makambani eInternet anotarisana nevatengi uye nhoroondo yakaratidza yekubudirira. Akashanda seKutanga Catalyst neAdvanced Technology Development Center kuGeorgia Tech uye akabata manejimendi ekuvandudza bhizinesi, kushambadzira uye manejimendi manejimendi manejimendi kuNCrowd, CipherTrust, EarthLink, uye MindSpring.
Stamplia: Tenga kana Vaka Yako Email Template Nyore
Sep 9, 2015 pa 11: 10 AM
Ndinobvumirana. Kufona kuteedzera chishandiso chikuru chekushambadzira. Isu tanga tichishandisa Ringostat kufona yekutevera system. Isu tava kuziva kuti ndeapi makambani ekushambadza ari kuunza mizhinji yemari yedu uye ndeipi kutambisa mari. Yedu yekutengesa timu kuita kwakabatsirawo kubva kune yayo yekufona kurekodha ficha. Zvese mune zvese, isu tiri kufara kwazvo neichi chidimbu che software.